Xaflad lagu xusayay afar sano kadib markii ciidamada Difaacada dalka galeen soomaliya oo lagu qabtay Mombasa – The Voice of Northeastern Kenya
Xaflad lagu xusayay afar sano kadib markii ciidamada Difaacada dalka galeen soomaliya oo lagu qabtay Mombasa
Waxaa shalay oo ay taariqdu ahayd 14-ka bisha October ku begneed shan sano guuradii kasoo wareegatay markii Ciidamada difaaca dalka ee KDF-ta ay gudaha u galeen dalka taaso ku begneed 14-kii bishii October ee sanadkii 2011-kii.
Xafladan oo ka dhacday Magaalada Mombasa ee gobolka xebta ee dalka ayaa waxaa ka qeyb galay Mas’uuliyiin ay kamid yihiin wasaarada difaaca dalka taliyaasha ciidamada KDF-ta iyo cutubyo katirsan militiriga dalka.
Wasiirada difaaca dalka haweeneyda lagu magacaabo Raychelle Omamo ayaa shegtay in tan iyo markii militariga dalka gudaha u galeen dalka Soomaliya ay gacanta ku dhigeen magaalooyin iyo deegano ay markii hore gacanta ku hayeen dagaalyahanada Alshabaab.
Waxay dhanka kale mahadnaq balaaran u jeedisay beesha caalamka iyo dhamaan dadkii taagerada u muujiyay ciidamada difaaca si ay uga guulestaan kooxaha ay la dagaalamayeenn.
Taliyaha ciidamada qalabka sida ee dalka Samson Mwathethe ayaa dhankiisa sheegay in ciidamada dalka dibadiisa uga maqan nabad ilaalin aysan kasoo bixi doonin mise soo laaban doonin ilaa danihi ay u galeen u soo fuliyaan oo ah in wadamadaasi ay helaan xasilooni buxda.
Dhamaan Mas’uuliyintii kasoo qeyb gashay xafladan ayaa waxay u hambalyeeyen ciidamada raga iyo dumarka iskugu jiro oo dagaalka kula jira xarakada Alshaab.
Maalintan ayaa loogu talagalay in lagu xasuusto islamarkaana la tusiyo in la garab taagan yahay dhamaan ehelada ay kasoo jeedan askartii ku dhimatay mise ku dhaawacantay dagaalka ay kujiren.
Qodobka la sugayay in mas’uuliyintii ka qeyb gashay xaflada ay ka hadlaan oo ah tirada askartii ku dhimatay weerarkii ciidamada difaaca dalkani Kenya loogu gestay Ceel Cade ayaa ka gabsaday in wax fahfaahin ah ay ka bixiyaan.
Intii ay socotay munaasabadaasi ciidamada difaaca dalka ayaa waxaa la gudonsiiyay gawaari ay Kenya ugu deeqday dowlada dalka shiinaha.
← Ababu Namwamba oo ku dhawaaqay in sanadka 2022-ka uu u tartami doono xilka ugu sareyo dalka
Wakiilka Viwandani oo meesha ka saaray in uu daaqada ka tuuray mooshinka ka dhanka ah Kidero →